Nwanyị ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ gwọọ na Medjugorje, ka afọ iri na asatọ tụpụchara mkpara | Ahụrụ m Jizọs n'anya
di Paolo Tescione - Machị 10, 2021
Mgbe Linda Christy, onye Canada, na-arụ ọrụ ruo afọ 18 n'oche nkwagharị, ọ gafere oche nkwagharị na oche nkwagharị. Ndị dọkịta enweghị ike ịkọwa ihe kpatara ya ji nwee ike ịhapụ ya wee gafere ugwu ngosipụta. N'ihi na ọgidigi azụ ya ka na-arụ ọrụ ma nyocha ahụike ya ndị ọzọ dịkwa ka ọ dị tupu agwọ ya. Sayensị ahụike enweghị ike ịkọwa etu Linda Christy si Canada hapụrụ oche nkwagharị ya na June 2010 na Medjugorje ka afọ 18 gachara na mmerụ ahụ dị njọ. Enwetara m ọrụ ebube. Abịara m n'oche nkwagharị ma ugbu a, m na-eje ije, dị ka ị si hụ. Nwa agbogho di nso a bu Mary Mary gwọrọ m na Apparition Hill ”Linda Christy gwara Radio Medjugorje. N'afọ gara aga, na ncheta nke afọ abụọ ọ gbakere, o nyefere akwụkwọ ahụike ya n'aka ụlọ ọrụ parish dị na Medjugorje. Ha na-agba akaebe banyere ọrụ ebube abụọ: ọ bụghị naanị na Linda Christy amalitela ije, kamakwa ọnọdụ ahụike na ahụike ya dị otu ọ dị na mbụ.
Enwetara m nsonaazụ ahụike niile gosipụtara ọnọdụ m ma ọ nweghị nkọwa sayensị metụtara ihe mere m ji aga. Ọkpụkpụ m dị n'ụdị dị njọ nke na enwere ebe ọ na-adịghị agbanwe agbanwe, otu ngụgụ akwagawo centimita isii ma m ka nwere ọrịa na nkwarụ niile nke ọkpụkpụ azụ, "ka ọ na-ekwu. “Mgbe ọrụ ebube ahụ mere n’ọkpụkpụ azụ m, ọ ka nọkwa n’ọnọdụ ọjọọ ọ dị na ya, ya mere enweghị ịgwọ ọrịa ọ bụla gbasara ihe kpatara m ga-eji nọrọ naanị m ma jee ije mgbe m jere ije n’elu osisi maka afọ 18 ma nọrọ otu afọ na oche nkwagharị